China 1 Kubvumbi 2021
Imba Imba yacho inotambanudzwa yakasvibira mune zvese planar uye stereoscopic, iyo inogadzira yakanaka nzvimbo kune vese vagari uye guta. Munzvimbo ine zuva reAsia, Breeze Soleil vachishandisa girini iyi inzira inoshanda yekufunga. Kwete chete basa rekupisa kwezuva muzhizha asiwo kudzivirirwa kwekuvanzika, kudzivirira kubva mumugwagwa mheremhere uye kutonhora kuita nekudzvinyirira kudiridzira kunogona kuwanikwa.
Chitatu 31 Kurume 2021
Kuchechi Tichifunga nezve kuwedzerwa kwenharaunda yechiKatorike uye kuwedzera kwevashanyi muSamui Island, Suratthani. Mary Rubatsiro rwechiKereke chekunze chekunze rakagadzirwa mune yakasanganiswa fomu yekunamata maoko, mapapiro eAngle uye maRays eMweya Mutsvene. Mukati wemukati, chengetedzo kunge uri mudumbu raamai. Nekushandisa refu uye rakamanikana mwenje mushe uye chikuru mwenje uremu hwekuisa kongiri kongiri inoenderera nepamhepo isina kuvakwa yakavakirwa kuti igadzire mumvuri unoramba uchichinja nenguva asi ichiramba ichinyararira mukati. Regedza kushongedza kwekufananidzira uye kushandiswa kwezvinhu zvakasikwa sekuzvinyaradza rugare rwepfungwa uchinamata.
Chipiri 30 Kurume 2021
Imba Yekugara Iyo yekugara inoshandisa iyo yemazuva ano yekushongedza painenge ichichengetera chivanze chepakati, iyo inomutsa yetsika tsika yeAkai mukuvakwa kwedzimba. Pano pekugara panobvumidzwa kubvuma zvese zvakapfuura nezvazvino, pasina kupokana. Chinhu chemvura chiri pamatanho emusuwo mukuru chinotsvaira kunze, pasi kune girazi rekumhara kunobatsira kuti nzvimbo dziwedzere kuvhurika, zvichibvumira vashandisi kuti vaende pakati pekunze uye mukati, zvakapfuura nanazvino, zvisingaite.
Muvhuro 29 Kurume 2021
Sofa Sofa reShell rakaonekwa sekusanganiswa kwemahombekombe egungwa uye mafashoni maitiro ekutevedzera exoskeleton tekinoroji uye 3d kudhinda. Chinangwa chaive chekugadzira sofa ine mhedzisiro yekunyepedzera kwemeso. Inofanirwa kunge iri mwenje uye yemhepo fenicha iyo inogona kushandiswa zvese kumba nekunze. Kuti uwane mhedzisiro yekureruka pawebhu renji dzenylon yakashandiswa. Nekudaro kuomarara kwechitunha kuri pakati nepakati nekuruka uye kupfava kwemitsetse silhouette. Yakaomeswa chigadziko pasi pemakona emativi echigaro chinogona kushandiswa sematafura emativi uye zvinyoro-nyoro pamusoro zvigaro nemakitsi anopedza kuumbwa.
Svondo 28 Kurume 2021
Nzvimbo Yekudyira Chuan's Kitchen II, iyo inotora yeShuhuan Yingjing yakasviba yevhu uye yakacherwa ivhu kubva pakavakwa metro svikiro, iri yekudyira yekudyira yakavakirwa pane inoedzwa tsika yechinyakare yechivanhu. Kuputsa muganho wezvishandiso uye kuongorora chimiro chemazuva ano chetsika dzechivanhu, Infinity Mind yakadzora magasi akaraswa mushure mekupfura muitiro wevhu rehusheing rehusheing, uye uvashandise sechinhu chikuru chekushongedza muKukan's Kitchen II.
Mugovera 27 Kurume 2021
Armchair Iko kusimbiswa kukuru kweiyo Infinity armchair dhizaini inoitwa chaizvo paiyo backrest. Icho chinongedzera cheiyo infinity chiratidzo - chiratidzo chakasungwa chevasere. Zvinoita sekunge inoshandura chimiro chayo painenge ichitendeuka, kuiswa kwesimba kwemitsetse uye kudzoreredza infini chiratidzo mumatanho akati wandei. Iyo backrest inodhonzwa pamwe chete neanoverengeka ebhendi mabumba ayo anoumba chekunze chidimbu, icho chinodzokera kuchiratidzo chechisingaperi cyclic yehupenyu uye chiyero. Iyo yekuwedzera kusimbiswa inoiswa pane yakasarudzika makumbo-micheka inochengetedza zvakachengeteka uye inotsigira mativi emativi eaya ruoko sekungoita machira.
1x3 Tafura Yekofi Chishanu 18 Chikumi
Decor Photoinstallation China 17 Chikumi
Only Right Here Akabata Banga Chitatu 16 Chikumi
Imba Kuchechi Imba Yekugara Sofa Nzvimbo Yekudyira Armchair